Uhlelo lokusebenza MeeGo kuyinto ovulekile project akhiwa Intel futhi Nokia umzamo ngoba notebook futhi netbook abasebenzisi. uhlelo lokusebenza MeeGo kuwumsebenzi ohlangene Intel Moblin futhi Maemo kusukela Nokia. MeeGo lusekele olunzulu ukuze touch imiyalo, okwenza kube nesigcawu agcwele ngoba netbooks and tablet PC, kanye nentuthuko application. MeeGo kuyinto engasindi, fast and olusha yesistimu yokusebenza.
Operation uhlelo MeeGo has izici ezilandelayo:
nezimo ngokugcwele futhi kulula isikhombi design.
Easy-to-ukusetshenziswa uhlelo lokusebenza.
Le phrojekthi umthombo ovulekile futhi isekela Linux Foundation Forum.
Ihambisana nawo laptops, ithebhulethi PC kanye namadivayisi ephathekayo.
izicelo Embedded edingekayo ukusebenza - isiphequluli, abadlali media njalo njalo.
Ukuze uhlelo lokusebenza MeeGo angase efakwe kudivayisi yakho, ungakwazi unezinketho ezimbili:
Faka uhlelo lokusebenza kusuka disk.
Faka kusuka USB flash drive.
Kunconywa ukuba akhethe indlela yesibili ukugwema iziphazamiso ukufakwa disk. Ngezansi ukufakwa isampula nge-USB.
Kanjani ukufakwa MeeGo?
Landa isithombe MeeGo OS kusukela website esemthethweni nokubhala a idrayivu ye-USB. Qiniseka ukuhlola inani memory stick kusengaphambili (kufanele kube okuningi MeeGo ifayela isithombe).
Manje, ukuze uqophe ifayela isithombe ku-USB, uzodinga isofthiwe ekhethekile, njengenjwayelo kuze kube idrayivu ye-USB asifanele.
Uma usebenzisa i-Windows, uzodinga isofthiwe ngokuthi Win32DiskImager.
Imiyalelo yokufaka kubasebenzisi-Windows
1. Download and kukhishwe-ZIP Win32DiskImager kufolda ezifanele.
2. Ingabe Win32DiskImager.exe okulandwayo ifolda. Khetha MeeGo isithombe (. IMG) wefayela ukuthi wena ukulandwa. Khetha i-USB yakho drive incwadi (isibonelo, F drive).
3. Cindezela inkinobho ukuqopha bese ukhetha "Londoloza isithombe USB».
4. Njengoba masinyane njengoba you ukuqeda inqubo yokuqopha, dlulelani esinyathelweni esilandelayo.
Imiyalelo yokufaka for Abasebenzisi be-Linux MeeGo
Ngosizo Image Umlobi, benze Python iskripthi ezokwenza ekutholeni kwesitoreji sakho se drive bese enze ku ngendlela ukungena. Okuhle ngokusebenzisa ukuqopha image wukuthi akukho ingozi ngephutha isula ulwazi uhlelo lwakho idrayivu kanzima. Gijimani umyalo olandelayo ukubhala amafayela wesithombe ngezindawo.
# CHMOD + X. / Image Umlobi
#. / Image Umlobi
Sebenzisa 'DD' ukuphuma esigungwini.
Imiyalelo be-Mac OS X
1. Vula esigungwini (Izicelo -> Izinsiza -> Isikhumulo).
2. Hlela uhlu lwakho ngohlobo DiskUtil ukuze ubone uhlu olugcwele lwamadivayisi.
3. Faka USB kanye ukusebenzisa umyalo olandelayo unmountDisk / dev / diskN (ukubaluleka N kufanele kuthathelwe indawo ye-USB inombolo drive).
4. Bese uthayipha Udo dd uma = / indlela / ukuba / downloaded.img ka = / dev / diskN ub = 1m (indlela kufanele indawo ngendlela Downloadable).
5. Bese ufaka diskutil ukhiphe / dev / diskN (N-USB inombolo drive).
6. Qiniseka netbook ukuqalisa sakho.
7. Faka i-USB drive notebook yakho, futhi kabusha. Qiniseka ukuthi i-oda ukuqalisa isethwe ukuze idrayivu ye-USB ithoma endaweni yokuqala. Manje uhlelo lokusebenza MeeGo azolayisha ngokuzenzakalelayo. Kusukela imizuzwana yokuqala uzokwazi ukuqiniseka ukuthi ukulanda yenzeka indaba ngemizuzwana, kanye kwesistimu Kulula kakhulu futhi enembile ukuze wonke umsebenzisi. Ngaphezu kwalokho, uhlelo lokusebenza uye esakhelwe izinhlelo, adingekayo ngokugcwele netbook.
Inqubomgomo yeqoqo Izintandokazi: Umhlahlandlela uma usuqala
Kungani Eloni Musk isekela ukwethulwa chips ku ubuchopho bethu?
"Sovigripp" (umgomo): yokusetshenziswa, Izimo, ukubuyekezwa
Ukususwa kwaleso sikhunta kwabiza bomlomo noma kungani kubalulekile ukuba siphathe namazinyo
Ukuthuthukiswa kwezicelo mobile-Android
Indlela ukupheka isinkwa amaqanda?